Blog Reader: [စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား]5New Entries: ဒေါက်တာ တင့်ဆွေ၏ ဘ၀ တကွေ့ကောက်ကြောင်း
[စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား]5New Entries: ဒေါက်တာ တင့်ဆွေ၏ ဘ၀ တကွေ့ကောက်ကြောင်း
ပြည်တွင်း စစ်ဖက် နီးစပ်သူများထံက ဗိုလ်ကျော်ဆန်းဟာ ဗိုလ်လောင်းဖြေဆိုခဲ့စဉ် အရပ်ပုပြီး ပေါင်ချိန် မပြည့်လို့ Underwear မှာ "ခဲသီး" ထည့်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန် များအောင် အကြံအဖန် လုပ် ဖြေဆိုခဲ့ကြောင်း ထပ်မံ သိရတဲ့အတွက် ဒေါက်တာ တင့်ဆွေ ပြောသလို ဗိုလ်ကျော်ဆန်းဟာ စစ်တပ်ထဲ အင်မတန်မှ "ပါ" ချင်တဲ့ ဖိုးပါချင် ဖြစ်ကြောင်း နဲ့ အခုလဲ လူပုစိတ်တို လူ့ဂွစာ ဖြစ်နေကြောင်း စာဖတ်ပရိသတ်များအား ထပ်လောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးချစ်ကောင်းရဲ့ အနှစ် နှစ်ဆယ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးထဲမှာ စစချင်း စာကြောင်းတစ်ကြောင်းက ''တိုင်းပြည် အတွက် အနှစ်နှစ်ဆယ် လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကြိုးတိုက်ထဲမှာ ရောက်နေတယ် ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုးရွားဆုံး လုပ်ရပ်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့  ဂုဏ်ပုဒ် သမိုင်း အစဉ်အလာကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့  ရိုးသားမှု၊ စွမ်းရည်ထက်မြက်မှု၊ တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုနဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာကို ဦးသန်းရွှေဟာ ခြေဖျားတောင် မမှီသူ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တက္ကသိုလ်မှာလည်း တစ်ချိန်က သင်တန်းသားတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်ငယ်လေးတွေ ကိုယ်စီကိုင်ရင်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကို အတုယူ အားကျ စံနမူနာ ပြခဲ့တာ ဒီနေ့ တိုင်းမှူး၊ တပ်မမှူး လောက်မှာ ရှိနေတဲ့ အဲဒီစစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်းများ သိနေပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေ လက်ထက်မှာတော့ တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင် သမိုင်းကို ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ လူဖြစ်စ ရှိတဲ့ ဦးသန်းရွှေက အခု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို "ဒီငတိ" လို့ သုံးနှုန်း ပြောဆိုနေတာကိုက ရာဇ၀င် ရိုင်းလှပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တပ် အသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုတည်း တိုးတက်ကြီးပွားလို့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး မတိုးတက် မကြီးပွားနိုင်သလို စစ်တပ်အနေနဲ့ လှေကြီး လှေငယ် ဆင့်ချင်လို့ မရနိုင်တာကြောင့် "ပြည်သူလူထုသာ အဓိက၊ ပြည်သူလူထု သာ ပဓာန" ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုထဲမှာ တပ်မတော်သားများရဲ့  မိဘ၊ ညီကို မောင်နှမ၊ ဆွေမျိုးသားချင်း မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့  တွေ့ကြုံခံစားနေရတာတွေ နားလည်ပေး ကြည့်ပါ။ တပ်မတော်သားဆိုတာ ပြည်သူလူထု ထဲကလာတာပါ။ ပြည်သူနဲ့ ခွဲခြားမရပါ။ ခွဲခြားရတာကတော့ တပ်မတော်၊ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင် စစ်စစ်နဲ့ တပ်မတော် ယူနီဖောင်းဝတ် အာဏာရှင်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရုံတွေမှာ ဆေးမရှိတဲ့အပြင် ဆေးရုံအပေါက်စောင့်၊ ဓာတ်လှေကား မောင်းသူကအစ သူနာပြု ဆရာမ အဆုံး အဆင့်ဆင့် ကိုပေးကမ်းရပြီး ဆရာဝန်က သူ့ရဲ့  ကိုယ်ပိုင် အပြင် ဆေးခန်းမှာ လာပြထားတဲ့သူ ဖြစ်မှ မျက်နှာသာပေးပြီး ကြည့်ရှူတဲ့ ခေတ်ကို ရောက်နေပါတယ်။ လမ်း(၄၀) ဆက်သွယ်ရေးရုံးက အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးဟန်ဝင်းရဲ့  မိခင်ဟာ ဒေါင်ဒေါင်မြည် နေကောင်းလျက် ရှိနေရာမှ မထင်မှတ်တဲ့ အနာလေး တစ်ခု ကိုဆေးရုံကြီးမှာ တက်ရောက်ခွဲစိတ် ကုသရာ မဖြစ်သင့်ဘဲ အသက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အထိ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ညံ့ဖျင်း နိမ့်ကျပုံကို ကြားသိရပါတယ်။ အခုမြန်မာပြည်မှာ သာမန် ကလေးမွေးရင်တောင် မွေးတဲ့ မိန်းကလေးကို သူနာပြု ဆရာမက ငွေကြေးစကားပြောပြီး ကလေးမွေးလုဆဲဆဲ အသက် လုနေရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာတောင် ငွေထပ်ညှစ်တဲ့ အနေအထားမျိုး ရက်စက်မှုအပေါင်း သရဖူ ဆောင်းကာ အားကောင်း နေပါတယ်။ "ခေါင်ကမလုံတော့ မိုးယို" နေတာလည်း မဆန်းလှပါ။ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ပြည်သူလူထုနဲ့ သာတူညီမျှ ပြည်သူလူထုက ပေးတဲ့ အခွင့်အရေးက လွဲလို့ မခံစားသင့်ပါ။ ဒါဟာ သူက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမို့ သူက သာမန် အရပ်သားမို့ဆိုပြီး ဖြေကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအတွက် လုပ်ပေးရမဲ့ တာဝန်ကို အာဏာရှင်တွေဟာ ဒီလိုပဲ လစ်လျူရှု ထားတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုဘဲ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နေရာတိုင်းမှာ အာဏာရှင်တွေဟာ ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ ကြည့်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ဆိုရင်လည်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို အရက်စက်ဆုံး ရဟန်းသံဃာပါ မချန်ဘဲ နှိပ်ကွပ်ပစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ရဟန်းသံဃာများ ကံဆောင်ပွဲမှာ သူတို့ပြောတဲ့ သံဃာတု ဆိုရင်တောင်မှ ပါဝင် ဆင်နွှဲကြတဲ့ သံဃာထုဟာ ထောင်သောင်းနဲ့ချီပြီး ရှိတာမို့ လုပ်ကြံဝါဒဖြန့်တာ သိသာလှပါတယ်။ ဒီလို သပိတ်ကံဆောင်ပွဲမှာ အင်နဲ့အားနဲ့ ထုထည်ကြီးမားစွာ ချီတက်ကြတဲ့ သံဃာတွေဟာ သံဃာတု မဟုတ်တာမို့ စစ်တပ်မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း အခြေအနေမှန် မသိအောင် ဖုံးဖိပြီး "ဒါဘာ" ဆိုတဲ့ တပ်တွင်း ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲတွေ လုပ်ကာ လိမ်ညာဝါဒဖြန့် ပြောထားကြမှာကို အတွင်းသိမို့ မြင်ယောင်မိပါ သေးတယ်။ များပြားလှတဲ့ သံဃာတော်တွေက တရားဓမ္မနဲ့အညီ ကံဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို မတရား နှိမ်နင်းခိုင်းလို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး လုပ်သူဟာ သူတွင်မက စစ်တပ်ကိုပါ ဘ၀သံသရာ အဆက်ဆက် မဟာအ၀ီစိငရဲမှ မတက်အောင် ဆွဲချခဲ့ပြီး ဖြစ်သလို ဒီ စစ်အာဏာရှင် ရှိသမျှ ဒီလိုပဲ စစ်တပ်ဟာ ခံနေရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီအရေးအခင်းဟာ ဒီမျှ ဖြစ်လာစရာမရှိဘဲ ပခုက္ကူမှာတင် သံဃာပရိတ်ရွတ်ပွဲမို့ သံဃာနည်းနဲ့ သာသနာရေးနဲ့တင် ရှင်းရင် အေးအေးဆေးဆေးကြီး ဖြေရှင်းနိုင် ရက်သားနဲ့ သံဃာတော်တွေကို ဓာတ်တိုင်မှာ ကြိုးတုပ်ပြီး ရိုက်နှက်မှု ဖြစ်စဉ်၊ ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ အမှုကို အာဏာရှင်တွေက စတင်လုပ်ခိုင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပဲယင်းမှာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှု လုပ်တာလည်း ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့  အမိန့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း သူ့ရဲ့ ကောက်ကျစ်တဲ့ ဥာဉ်ကို အားလုံး မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယမြောက် လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲ နှင့် အနီးကပ်ဆုံး ရန်သူ
ယနေ့ ကျရောက်တဲ့ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် မှ ကိုရင်အေးရဲ့  လွတ်လပ်ရေးနေ့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ကို စာဖတ်ပရိသတ်များအား တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်သူလူထု အမှန်တကယ် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီး အဖြစ် နေထိုင်နိုင်ကြဖို့ တပ်မတော်သားများ အားလုံး ပြည်သူလူထုအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းလက်တွဲကာ အာဏာရှင် စနစ်အား တွန်းလှန်သွားကြပါရန် ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်မှ ဆန္ဒပြု တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက် နေ့တွင်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ အသက်စွန့် ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်၊ အမိမြန်မာပြည် တိုင်းတပါးကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်ကာ၊ လွတ်လပ်၍ အချုပ်အချာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်၊ ဝင့်ကြွားစွာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် နှင့် ပြည်သူတို့ အတူတကွ လက်တွဲကာ၊ တပ်မတော်ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း၊ အနီးကပ်ဆုံး ရန်သူဖြစ်သည့် ဖက်စစ်တို့အား တွန်းလှန်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်၊ နယ်ချဲ့တို့ထံမှ လွတ်လပ်ရေးကို ညီညွတ်စွာ ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
လာမည့် ၂၀၀၉ ခု၊ ဇန်နဝါရီ (၄)ရက် ဆိုလျှင်၊ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့သည်မှာ (၆၁)နှစ်ပြည့်မြောက်တော့မည် ဖြစ်သည်။ (၆၁)နှစ်အတွင်း အမိမြန်မာပြည်မှာ ပြည်သူအများစုကြီးအနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ အရယူပေးခဲ့သည့် လွတ်လပ်ရေး၏ အနှစ်သာရကို အမှန်တကယ် ရရှိခံစားခဲ့ကြရပါရဲ့လား ? . .
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံခဲ့ရပြီး တပ်မတော်သည် ဖက်ဆစ်အမွေဆိုးကို အရယူခဲ့သည့် ခေါင်းဆောင်ဆိုး ၏ လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရပြီးနောက်၊ "ပြည်သူနှင့်အတူ တိုင်းတပါးကျွန်ဘဝမှ လွတ်လပ်ရေး အရယူပေးခဲ့သည့် တပ်မတော်ဘဝ" မှ "ပြည်သူအချင်းချင်း ကျွန်ပြုသည့်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး၏ လက်ကိုင်တုတ် တပ်ဘဝ" သို့ ရောက်ခဲ့ရသည်ကို၊ အနှစ်(၆၀)သမိုင်းက အထင်အရှား သက်သေပြနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုချင်းပြဿနာကို လက်နက်အားကိုး အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး၏ ဖြေရှင်းမှုမျိုးဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့ ကြသဖြင့် ပြည်တွင်းစစ်မီး ဟုန်းဟုန်းတောက်ခဲ့ရပြီး ၎င်းဒါဏ်ကို ပြည်သူတရပ်လုံး ခါးဆီးခံခဲ့ ရသည်မှာ ယနေ့ထိတိုင် ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည် မွဲပြာကျခဲ့ရပြီး ကမ္ဘာ့အလည်မှာ အောက်တန်းနောက်တန်း ကျခဲ့ရသည်။ အစဉ်အလာကြီးမားခဲ့သည့် တပ်မတော်သည်လည်း တိုင်းရင်းသား ပြည်သူကိုဖိနှိပ်သည့် လက်ကိုင်တုတ် ယန္တရားအဖြစ် ရောက်ခဲ့ရပြီး လူထု၏ အော့နှလုံးနာမှုကိုခံခဲ့ရ ခံနေရဆဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဖက်ဆစ်အမွေဆိုးကို ဆက်ခံခဲ့သည့် အာဏာရှင်၏ လက်ဝေခံ စစ်အာဏာရူးတစ်စု၏ နဖါးကြိုး ထိုးထားခြင်း ခံနေရပြီး တပ်မတော်တွင်းရှိ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်၊ တပ်သား အဆင့်ဆင့်တိုင်းသည် မိမိတို့၏ အရာရှိကို သာမကတော့ဘဲ အရာရှိ၏ မိန်းမ၊ သားသမီး၊ ယောက္ခမ အဆုံး အားလုံး၏ ကျေးကျွန်များ သဖွယ် ဆက်ဆံခံရ လုပ်ကျွေးပြုစု ပေးနေကြရသည်ကို တပ်မတော်သားတိုင်း သိလာကြပြီ ဖြစ်သည်။ မိမိပြည်သူချင်း အိုးမဲသုတ် သတ်ဖြတ်ခိုင်းထားခြင်း၊ အနှစ်သာရမဲ့ စစ်ပွဲများ ဖန်တည်းပေးထားခြင်းဖြင့်၊ တပ်မတော်သားအားလုံးကို မအားရအောင် မလိုအပ်ပဲ အသက်စွန့်ခိုင်း ထားခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အာဏာကို ကြီးထွားသထက် ကြီးထွားအောင် တည်ဆောက်ထားခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသား ညီအကိုများ နေထိုင်ရာ နယ်စပ်ဒေသ များတွင်လည်း စစ်ပွဲများကြားတွင် မတရားမှုပေါင်းများစွာကို အစွမ်းကုန်ကျူးလွန်စေသော နည်းဖြင့် ရပ်တည်ခိုင်း ခံထားရပြီး ၎င်း၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် တပ်မတော်တစ်ခုလုံး၏ ဂုဏ်သိက္ခာမှာ ကမ္ဘာ့အလည်တွင် အဖတ်မဆည် နိုင်အောင် ကျဆင်းစေခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ(၄)ရက်တွင် ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တပ်မတော်သည် ပြည်သူတရပ်လုံးနှင့် လက်တွဲ၍ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးကို အရယူပေးခဲ့သည်မှာ (၆၁)နှစ် တင်းတင်းပြည့်ပြီ ဖြစ်သည်။
ဒီကနေ့ အာဏာရှင်၏ အစေအခိုင်း ခံနေရသည့် တပ်မတော် ဘယ်လိုဆက်ရပ်တည်ကြမည်နည်း?
ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးအနေနှင့် အာဏာရှင်တစ်စု၏ မတရားပြုကျင့် အုပ်စိုးထားမှုမှ လွတ်မြောက်ဖို့ရာ နည်းမျိုးစုံ ဖြင့်ကြိုးစားခဲ့ကြ ကြိုးစားနေကြဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယမြောက် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် ဒီကနေ့ မျိုးဆက်တို့ ပေးဆပ်နေကြရသည်။ ဘုရားသားတော် သံဃာတော်များ လူမဆန်စွာ နှိပ်ကွပ် ခံနေကြရသည်။
အားလုံးမှာ လက်တဆုပ်စာ အာဏာရှင်တို့် မတရားရယူထားသည့် အခွင့်အရေးများ လက်မလွတ်ရရေး တစ်ခုတည်း အတွက်သာ စစ်တပ်တခုလုံးမှာ အသုံးချခံ အကာအကွယ် ပေးထားခဲ့ရသည်။ အဖိနှိပ်ခံပြည်သူ တရပ်လုံးမှာ စားရာမဲ့သောက် ရာမဲ့ အနာဂတ်မဲ့ နင်းပြား ဘဝများ ဖြစ်နေကြရသည်။
ထိုဘဝများစွာထဲတွင် ဒီကနေ့ တပ်မတော်သား အများစု၏ မိဘများ၊ ဇနီးမယား၊ သားသမီးများလည်း အပါအဝင် ဖြစ်နေကြရသည်။ တပ်မတော်သားများ၏ မိဘ၊ ဇနီး၊ သားသမီးများသည်လည်း ပြည်သူထဲမှ ပြည်သူများသာ ဖြစ်ကြသည်။ ပြည်သူလူထုကြီးနှင့် ထပ်တူခံစား နေကြရသူများသာ ဖြစ်ကြသည်။ ပြည်သူလူထုကြီး နှင့်အတူ လွတ်လပ်ရေးကို လိုလားနေကြသူများဖြစ်ကြသည်။
လက်တဆုပ်စာ အာဏာရူး စစ်ခေါင်းဆောင်တစ်စု၏ မိမိတို့နှင့် မိမိတို့ကိုသစ္စာခံသူ က္မျန်တစ်စုသာ ကောင်းစားရေး အတွက် အများစုကို စစ်ကျွန်ပြုထားသည့် စနစ်ဆိုးကြီးမှ ရုန်းထွက်သည့် "ဒုတိယမြောက် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ" တွင်၊ ပြည်သူလူထုကြီးနှင့်အတူ ပူပေါင်း ပါဝင်ကြခြင်းဖြင့် တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို အချိန်မှီ ကယ်တင်ကြရမည့်အချိန်ပင် ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် "မျိုးချစ်တပ်မတော်သား အပေါင်းတို့အနေနှင့် ယနေ့ ဇန်နဝါရီ(၄)ရက် နေ့ကစလို့ သင်တို့နှင့် အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကို စတင်ရှာဖွေ တော်လှန်ကြခြင်းဖြင့် ဒုတိယမြောက် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ ပြည်သူလူထုကြီးနဲ့အတူ ပူးပေါင်းကာ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကို အမိမြေမှ အပြီးတိုင် ဖယ်ရှားကြပါစို့" ဟု (၆၁)နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခါသမယမှာ လေးနက်စွာ တိုက်တွန်း ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။